3000 chitubu chematsi gadziri | Rayson
3000 chitubu chematuru
Rayson ibhizinesi rinokosha rinogona kupa vatengi vane huwandu hwepamusoro-mhando zvigadzirwa kusanganisira yedu nyowani yechigadzirwa 3000 chitubu chematani uye mabasa akakwana. Chikwata chedu chebasa chinoshanda pamhepo kuitira kuti vape vatengi kubva kunyika dzakasiyana nematunhu nemabasa ekukurumidza. Kusimudzira iyo Tenet yeVatengi Kutanga, tinopa Protch Distance Service kana tapedza kugadzirwa uye QC maitiro. Tinoda kugadzirisa matambudziko uye kupindura mibvunzo yese yevatengi. Ingobata nesu nekukurumidza.
Nezvikamu zvitatu zvemakumi matatu ematuru Muzvikamu zvese zvese, nyanzvi dzeQC dzinotarisa maitiro ega ega kuti uve nechokwadi chechigadzirwa mhando. Uyezve, kutakura kwedu kwakajairika uye kunogona kuita zvinodiwa nemumwe mutengi wese. Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye kurira. Kana iwe uine chero mibvunzo kana kuda kuziva zvakawanda nezve yedu 3000 chitubu mateti, tidire zvakananga.
Rayson ibhizinesi rinobhadhara zvakanyanya kutarisisa kune kugadzirisa technologies uye r & d simba. Isu takashongedzerwa nemachina epamberi uye tisa madhipatimendi akati wandei kugutsa izvo zvakasiyana zvinodiwa zvehuwandu hukuru hwevatengi. Semuenzaniso, isu tine yedu yebasa department iyo inogona kupa vatengi zvine chekuita zvakanyanya mushure mekutengesa. Nhengo dzebasa dzinogara dzichimira dzinoshanda vatengi kubva kunyika dzakasiyana uye matunhu, uye unoda kupindura mibvunzo yese. Kana iwe uchitsvaga mikana yebhizinesi kana kuti unofarira mune yedu 3000 chitubu matti, bata nesu.